धनी मानिसहरु कहाँ कहाँ लगानी गर्छन् ? कसरी बन्छन् अझ धनी ?  Clickmandu
धनी मानिसहरु कहाँ कहाँ लगानी गर्छन् ? कसरी बन्छन् अझ धनी ?
क्लिकमान्डु २०७५ साउन २४ गते १८:५३ मा प्रकाशित
पैसा बचत भएपछि धेरै आम मानिस आधुनिक ग्याजेटस् र म्यूचुअल फण्ड खरिद गर्न तर्फ लाग्छन् । तर, धनी मानिसहरु यस्तो गर्दैनन् । धनी मानिसहरु आफ्नो पैसा सामान्य मानिसले सोच्नै नसक्ने क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । त्यसकारण नै धनी मानिसहरु झन् धनी बन्दै जान्छन् ।
धनी मानिसको लगानी यात्रा
जोशुआ कोलम्यानको परिवारले सन् २००४ मा अमेरिकाको सिकागोमा रहेको टेलिकम कम्पनी ४० करोड डलरमा बिक्री गर्यो । कम्पनी बिक्री गरिसकेपछि कोलम्यानको परिवार धेरै समय चर्चामा रहेन । तर, कोलम्यान २७ वर्ष पुगेपछि फेरि उनको परिवारको चर्चा सुरु भयो ।
सन् २०११ मा कोलम्यान २७ वर्षको हुँदा उनले मुभमेन्ट एड्भान्स प्लानिङ नामक कम्पनी सुरु गरे । यो कम्पनीले मानिसलाई कर, कानूनी कुराहरु र सम्पतीसँग जोडिएका विषयमा सल्लाह दिन्छ ।
यदि उनले कुनै दिन यो व्यवसाय पनि बेचिन भने ४० करोडभन्दा धेरै रकम पाउने छिन । यसलाई अल्फा जोखिम भन्ने गरिन्छ । यस्तो जोखिम मोलेर असिम नाफा आर्जन गर्न सकिन्छ । तर, यस्तो कारोबारमा नाफा नै हुन्छ भन्ने कुनै आधार छैन ।
धनी मानिसहरुले कहाँ लगानी गर्छन् ?
क्लोज्ड इन्डिेड फण्डः यो फण्डमा कम्तिमा पनि पाँच वर्ष रकम जम्मा गर्नुपर्छ । यो फण्डबाट धेरै ब्याज पाईन्छ । कर्यौ धनी मानिसले यस्ता क्षेत्रमा पनि लगानी गरेका हुन्छन् ।
विमान भाडामाः लण्डनको फ्लेमिङ फ्यामिली एण्ड पार्टनर्सका सिईओ इयान मार्शका अनुसार यो कम्पनीका ग्राहक डारिक नामक कम्पनीमा लगानी गर्छन् । यो कम्पनीले अन्य लगानीकर्ताको रकमबाट विमान खरिद गरेर विमान कम्पनीलाई भाडामा दिन्छ । यसरी लगानीकर्ताले वार्षिक ९ प्रतिशतसम्म व्याज पाउने गर्छन् । जब कि अमेरिकी सेयर बजारको औसत रिटर्न ३ प्रतिशत छ ।
कृषिमा लगानीः विश्वभर भोजनको माग निरन्तर बढिरहेको छ । धनी मानिसहरु कृषिमा लगानी गर्ने गर्छन् । धनी मानिसहरुले अरुले थाहा नपाउने गरी आफ्ना शाखा कम्पनी वा फण्ड मार्फत कृषिमा लगानी गरिरहेका हुन्छन् ।
शौखमा आधारित लगानीः धनी मानिसहरु आर्ट, कार, घडी, रक्सी, तथा संगीत उपकरण जस्ता उद्योगमा पनि लगानी गर्ने गर्छन् । यस्ता उद्योगबाट वर्षौपछि राम्रो नाफा हात लाग्छ । विश्वभरका धेरै धनी मानिसहरुको लगानी यस्तै क्षेत्रमा रहेको हुन्छ ।
धनी मानिसहरु एउटै कारोबारमा मात्रै लगानी गर्दैनन् । कोलम्यानले पनि कयौँ कारोबारमा लगानी गर्ने गरेका छन् । ‘द गस्ट गाईड टु मेकिङ मनि एण्ड ह्याभिङ फन इन स्टार्टसअप’ नामक पुस्तकका लेखक डेभिड रोसका अनुसार नयाँ सुरु हुने आधाभन्दा धेरै कम्पनी ठप्प हुन्छन् । तर, सफल हुने कम्पनीहरु भने सुरुवाती लगानीमा २० देखि ५० प्रतिशत नाफा दिन्छन् । (एजेन्सीहरुको सहयोगमा)
ठूला बैंकसँग डरायो राष्ट्र बैंक, स्प्रेडको गणना विधि परिवर्तन गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न सकेन
मौद्रिक नीति अघि नै आधा दर्जन वाणिज्य बैंकले मर्जरको सम्झौता गरुन् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना